URIHANNA UPHEHLELELA UBUNGAKANANI OBUTSHA OBANDAKANYA I-SAVAGE X I-FENTY LINGERIE LINE EGQIBELELEYO YAMAQELA EBACHELORETTE - IINDABA ZOMTSHATO
Eyona Iindaba Zomtshato URihanna usandula ukuLungisa iiLingerie zoMlinganiso oMtsha oBandakanya iiHandcuffs
URihanna usandula ukuLungisa iiLingerie zoMlinganiso oMtsha oBandakanya iiHandcuffs
ENTSHA YORK, NY-MEYI 10: Ihologram kaRihanna iboniswa ngexesha lokumiliselwa kwegama lakhe langaphantsi, uSavage X Fenty eVillain ngoMeyi 10, 2018 kwisiXeko saseNew York. (Ifoto nguKevin Mazur / imifanekiso ka-Getty kuSavage X Fenty)
Ngu: Joyce Chen 05/11/2018 kwi-2: 15 PM
Ngoku abalandeli abafuna ukuhambisa iRiRi sass eyongezelelweyo banenye indlela yokwenza njalo-ukongeza ekuyiphoseni kumgangatho wokudanisa ulwamkelo xa i-DJ idlala Iingcinga zasendle.
URihanna usungule ngokusesikweni ilayini yakhe yangaphantsi, Ubundlobongela x Amashumi amabini , ngolwesiHlanu ngolwesiHlanu, kwaye ingqokelela ijongeka ngathi iyadinisa kwaye inomdla njengemvumi uqobo. Ukongeza kwizicucu zemveli ezinje ngeebras, ii-T-shirt bras, impahla yangaphantsi, ii-corsets, ii-rompers, ii-jumpsuits kunye neengubo, ilayini ka-Rihanna ikwabandakanya ii-handcuffs.
Imvumi yaphosa umsitho wokuqokelelwa kwengqokelela eBrooklyn ngoLwesine ebusuku, inomboniso wehologramu oyinyani ngokunikezela ngembonakalo evela emgceni, kubandakanya i-corset yentsimbi emnyama kunye nengubo epinki enoboya.
URihanna we #SavageXFenty pic.twitter.com/XFGdve3PVh
-Iindaba zeRihanna (@ Rihanna2) Ngomhla we-10, 2018
Kwakhona inqaku labalandeli abanemincili: URihanna uqinisekisile ukuba ubandakanya ubungakanani bomgca, ngobungakanani be-bra obuqala kwi-32A ukuya kwi-44DD, kunye neempahla zangaphantsi kubungakanani ukuya kwi-3x. (Xa imvumi yomSebenzi yaphehlelela i-Fenty Beauty line line ngo-Septemba ophelileyo, naye wanconywa ngokungenisa i-40 ezahlukileyo ukulungiselela zonke iithoni zolusu.)
URihanna ebehlekisa ngemigca yakhe yangaphantsi kakhulu nge-Instagram kwezi veki zimbalwa zidlulileyo, kangangokuba isiza saqala ukuseta imigca yokulinda abathengi ukuba bangene kwindawo yokuthenga, izinto ezininzi ezithengisayo ngemizuzu.
Imvumi yenzekile ukuba ibe sematheni ngolwe-Sihlanu emva kokucebisa ukuba isipho sayo somtshato sikaMeghan Markle kunye neNkosana uHarry siza kuba sigqithile. Yena uxelelwe Ukuzonwabisa ngokuhlwanje , Ndicinga ukuba kuya kufuneka ugqithele xa usipha indoda kunye nomfazi, kuba bobabini abantu bayazuza kwisipho.
Abona balinganisi bomzimba beelokhwe zomtshato
Izimvo zebhedi yokulala
indlela yokwenza iarbor yomtshato
usebenzisa nini mrs okanye ms